Xil wareejin ka dhacday degmada Balcad + Sawirro – Balcad.com Teyteyleey
Cismaan Maxamed Xaadoole ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay maamulka degmada Balcad ee gobolka Sh/dhexe kadib markii shalay lagu qabtay degmada Balcad xaflad xil wareejin ah.
Xafiiska degmada Balcad ayaa saaka ahaa mid mashquulsan kadib markii CIsmaan Maxamed Xaadoole oo muddo saddex sano ah ka maqnaa degmada Balcad uu dib u bilaabay howlaha shaqo ee maamulka degmada Balcad.
Munaasabad si weyn loo soo agaasimay oo ka dhacday warshadii dharka ee magaalada Balcad ayaa waxaa ka soo qeybgalay Ra’iisal wasaarihii hore ee Soomaaliya, mas’uuliyiin ka socotay dowlad goboleedka Hirshabeelle,maamulka gobolka Sh/dhexe,duubab dhaqameedyo, nabadoono, martisharaf,qeybaha kala duwan ee bulshada.
Kulankaa ayaa Guddoomiyaha cusub ee Degmada Balcad Guddoomiyihii hore ee Degmada Balcad Maxamuud Maxamed Saney ayaa ku wareejiyay xilka guddoomiyaha degmada Balcad.
Guddoomiyaha cusub ee degmada Balcad Xaadoole oo si weyn loogu soo dhoweeyay degmada Balcad kadib markii uu muddo saddex sano ah ka maqnaa ayaa sheegay inuu xooga saarayo sidii ammaanka loo xaqiijin lahaa, isla markaana loo hormarin lahaa bulshada ku dhaqan degmada Balcad.
Munaasabadan xil wareejinta ayaa waxaa ka hadlay Ra’iisal wasaarihii hore ee Soomaaliya,Wasiirka Arrimaha Gudaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle, guddoomiye ku xigeenka gobolka Sh/dhexe Axmed Meyre Makaraan iyo mas’uuliyiin kale.
Degmada Balcad ee markale maanta uu xilkeeda la wareegay CIsmaan Xaadoole ayaa waxaa ka jira dib u dhac dhinaca adeega bulshada ah iyadoo degmada Balcad oo caasimada dalka u jirta 37km uuna ku oolin isbitaal dadka lagu daweeyo.
SIdoo kale degmada Balcad ayaa waxaa ku yaal hal ceel oo kaliya kaasoo aan dabooli Karin baahida biyaha dadka ku nool sida uu u sheegay mid kamid ah waxgaradka degmada Balcad.
Wadada isku xirta degmada Balcad iyo magaalada Muqdisho ayaa Don’t skip this ad, because it will provide you with the best Lozol purchase solution! Buy it now for 0.98 USD today! ah mid burbursan oo aan la dayactirin muddo ka badan 30 sano. Waxaana marwalba ka dhaca shil iyadoo gawaarida ay ku adag tahay in ay maraan burburka awgiis.
Madaxweyne Farmaajo iyo RW ingiriiska oo si wada jir u furay Shirka London. Sawirada Shirka